3 shay oo ay tahay inaad haa ama haa safar ku qaadato | Safarka Absolut
3 shay oo ay tahay inaad haa ama haa u qaadato safar
Safarka Absolut | 13/12/2021 11:59 | La cusbooneysiiyay 15/12/2021 12:04 | kuwa kale
Hadda xaaladda ka dhalatay imaatinka masiibada ayaa u muuqata mid tartiib tartiib ah sidii caadiga ahayd ku soo laabanaysaQaar badan oo naga mid ah ayaa isu diyaarinaya, fasaxa soo socda, si aan u qaadno safar aan ka go'i karno walbahaarka iyo walaaca badan. Si tan loo sameeyo, waa in aan si taxadar leh u qorsheyno jidka dalxiiska si aan u raacno taas oo lagu hubinayo marinkayaga meelaha iyo meelaha dalxiiska meesha ugu muhiimsan ee aan u socono.
1 3 shay oo ay tahay inaad ku qaadato shandadaada
1.1 Si fiican u diyaari dharka aad xidhan doonto
1.2 Ha iloobin qalabka elektarooniga ah
1.3 Ku dammaanad qaado nadaafaddaada alaabada nadaafadda
3 shay oo ay tahay inaad ku qaadato shandadaada
Arrin kale oo ay tahay in lagu xisaabtamo ayaa ah waxyaabaha ay tahay inaan nala qaadanno safarkayaga. Waxaa jira diyaargarow badan oo, marar badan, aan dhammeyno ka batay iyo xirxiran khaldan iyo daqiiqada u dambaysa. Si aan uga badbaadno xaaladdan oo kale, waxaanu kuugu soo bandhigi doonaa hoos 3-da shay ee ay tahay in aad raacdo si aad u safarto.
Si fiican u diyaari dharka aad xidhan doonto
Inkasta oo ay iska caddahay, waa in aan haysanaa Dharka saxda ah si aan ugu nafisno intii suurtagal ah oo aan ku aadno goobta dalxiiska. Marka laga soo tago nigisyada aan xidhan doono, waa in aan la jaanqaadno dookhyadayada cimilada aan halkaas ka heli doonno: haddii aad sugto heer kul hoose, diyaari gacan-gashiyada, koofiyadaha, cumaamado iyo funaanadaha dhididka; lid ku ah, haddii aad sugto aad u kululaato intaad safarka ku jirto is hubso gaabanshaarar iyo funaanado gacmaha xarfo ah. Haddii ay jirto xeeb u dhow, ha ilaawin dharkaaga dabaasha!
Si loo fududeeyo doorashada dharka lagu qaato shandadaada, waxaan kugula talineynaa inaad doorato xirmooyinka dharka in aad isticmaali karto oo aad kala duwanaan karto inta lagu jiro maalmaha aad joogtid. Haddii ay dhacdo in joogitaankaagu uu dheeraado, si fiican ugu raran funaanado, surwaal iyo kabo nooc kasta ah.
Ha iloobin qalabka elektarooniga ah
Horumarka tignoolajiyada kuwaas oo soo ifbaxay sannadihii u dambeeyay waxa ay keeneen tiro aad u tiro badan oo qalab elegtarooni ah oo aad waxtar u leh. In laga gudbo casriga iyo Charger-keeda, waa in aan hubinno in aan ku siddo shandadeena kamarad, Laptop-keena iyo baytari dibadda ah oo aan ku shubaneyno qalabkeena haddii uu batteriga dhamaado.
Marka la raraynayo qalabkan, waxa ay noqon doontaa lama huraan xirxiro sida ugu macquulsan si looga hortago in ay waxyeello soo gaarto xilliga gaadiidka. Si aad tan u samayso, isku day inaad ku qaadato boorsadaada ama shandad gaar ah si aad u dammaanad qaaddo ilaalintooda. Haddii ay dhacdo in aad dareento in ay kugu waajib tahay in aad ku rarto shandadaada gacanta, iska hubi in aad geliso meesha dhexe ee shandadaha.
Ku dammaanad qaado nadaafaddaada alaabada nadaafadda
Waxay u badan tahay, markaad timaaddo goobtaada dalxiiska, waxaad joogi doontaa a hotel taas oo siisa macaamiisheeda nooc kasta oo kala duwan alaabta nadiifinta. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay dhacdo inaadan si hubaal ah u garanayn kuwaas oo noqon doona qalabkan hoygu ku jiri doono, ama haddii aad ogtahay laakiin qaar ka mid ah aasaaska ay maqan yihiin, waa inaad qaadataa Bacda qurxinta oo leh shandado ku habboon: burushka cadayga, carfiyeyaasha, qoyaanka, masaxarada, saabuunta ... iyo wixii la mid ah.
Maadaama ay yihiin alaabooyin lagu dammaanad qaadayo nadaafadda qaybaha kala duwan ee jidhkeena, waa in aan hubinno in ay ku filan yihiin si fiican loo ilaaliyo si looga hortago inay wasakhoobaan. Xaaladda daasadaha alaabta, lagama maarmaan ma noqon doonto, laakiin waxaad u baahan kartaa inaad ku rarto boorso kala duwan si aad uga hortagto inay qabtaan. wasakh iyo qoyaan.
In kasta oo aanay qayb ka ahayn shandadaha, haddana mid ka mid ah alaabooyinka ay tahay inaad dejiso markaad safar u baxayso ayaa ah mid wanaagsan. caymiska guriga Iyada oo ka ilaali hantidaada xatooyada suurtagalka ah iyo dhacdooyinka kale inta lagu jiro fasaxyadaada. Xusuusnow inaad kala tashato fikradaha ku saabsan soo jeedinta siyaasadda la heli karo, sidoo kale isbarbardhigga qiimaha iyo caymiska si aad u doorato, sidaas darteed, midka ugu habboon baahiyahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » 3 shay oo ay tahay inaad haa ama haa u qaadato safar
Booqashada Sri Lanka: Dalxiisayaasha Isbaanishka miyay u baahan yihiin fiisaha?
Ka shaqaynta dibadda: waa kuwee waddamada xawaaraha ugu sarreeya ee fiber-ka?